people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ९ गते शुक्रबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ९ गते शुक्रबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ९ गते शुक्रबार
Posted on June 23, 2017 by Purna Nanda Joshi
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७४ साल आषाढ ९ गते शुक्रबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ जुन २३ तारीख, आषाढ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी ११ः१७ बजे सम्म पश्चात औंसि तिथी चन्दमा बृष राशिमा १८:४६ बजे सम्म सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु दर्शश्राद्ध, निशि बार्ने
तपाईको बाणीकोगलत अर्थ लाग्न सक्छ बोल्दा होशपूर्याउनु होला । बादबीवाद को झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । लेनदेन सम्बन्धी कार्यमा बिशेष सजग रहनु पर्ने छ । प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । सामान्य यात्राको योग रहेको छ ।
निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ ।स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ ।
नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । आर्थीक क्षेत्र मध्यम रहनेछ । पतिपक्क्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ ।
मान्यजनको अनुसरण बाट बिशेष लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । शारिरीक आलस्यताले सताउला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । सामान्य कार्यमा ज्यादा समय ब्यतित हुनसक्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्च हुन सक्छ । दाम्पत्य शुखमा सामान्य खराबि आउन सक्नेछ ।
कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । दाजुभाई तथा मित्रजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यमा बिशेष फाईदा पुग्नेछ । साधारण यात्राको सम्भाबना रहको छ ।
बोलिको कारण कुलकुटुम्ब सगँको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुन सक्ला । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।।तपाईको कार्यको फल अरुलाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनु होला ।
कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यहरुमा सफलता हात लाग्नेछन । लगानिको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । भोज भतेरमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ ।
सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नु लापरवाहिले धनमालको क्षति हुन सक्नेछ ।
आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुलक साबित हुनेछन । बिद्या प्राप्तिको रहेको छ । सानो प्रयासले ब्यक्तित्व बिकासमा निकै टेवा पूर्याउनेछ । पारीबारिक मनोरञ्जका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ ।सामाजीक कार्यका निम्ति साधारण खर्च हुन सक्नेछ ।
सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।
शुभ चिन्तकहरुको प्रयाप्त साथ प्राप्त हुनाले कार्यसम्पादनमा सहजता रहनेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । प्रतिश्पदा मुलक कार्यमा तपाई अब्बल रहनु हुनेछ ।